အလကားပေးထားရတာမဟုတ်တဲ့ လူမှုဖူလုံရေးကဒ်ပြားလေးအကြောင်း တစေ့တစောင်း -
အလကားပေးထားရတာမဟုတ်တဲ့ လူမှုဖူလုံရေးကဒ်ပြားလေးအကြောင်း တစေ့တစောင်း
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းဌာနများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြရသော အလုပ်သမား ဝန်ထမ်းများနှင့် အလုပ်ရှင် များ ၎င်းလုပ်ငန်းဌာနများရှိ အုပ်ချုပ်ရေး အရာရှိများ၊ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိများ၊လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဌာနမှူးများ အားလုံးမင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ!
လူမှုဖူလုံရေးအာမခံ ဥပဒေကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၃၁ ရက် နေ့မှာ ပြဌါန်း ခဲ့ပါတယ်။
၎င်း ဥပဒေ ဟာ နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ အမိန့်ကြေညာစာအမှတ်ဖြင့် လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်သည့်နေ့မှ စ၍ အကျိုး သက်ရောက်ပါတယ်။
လူမှုဖုလုံရေးရန်ပုံငွေ အတွက် အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်ရှင်က လစာဝင်ငွေအပေါ်မှာ အချိုးကျ တွက်ချက်ထားသည့် ငွေပမာဏ ကို လစဉ် မဖြစ်မနေ ထည့်ဝင်ပေးရပါတယ်။
အစိုးရအနေဖြင့် လူမှုဖူလုံရေးအာမခံ မထားမနေရ လုပ်ငန်းဌာနများကို သတ်မှတ်အကြောင်းကြားထားပီးအာမခံမထားမနေရ အလုပ်သမားတိုင်းသည် မိမိတို့ ဝင်ငွေမှ လစဉ် ပေးဆောင်ရသည်။ အလုပ်သမားတိုင်း လူမှုဖူလုံရေးကဒ် လုပ်ထားရပါတယ်။
လူမှုဖူလုံရေးအာမခံ၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က အလုပ်သမားတိုင်းအတွက်…
၃။အလုပ်လုပ်က်ိုင်နိုင်စွမ်းမရှိမှု အကျိုးခံစားခွင့် ။ သက်ပြည့်အငြိမ်းစားအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် ကျန်ရစ်သူအကျိုးခံစားခွင့်
၄။ အလုပ်လက်မဲ့အကျိုးခံစားခွင့်
ယနေ့လုပ်ငန်းဌာန တိုင်း အလုပ်ရုံ စက်ရုံတိုင်းက အလုပ်သမားများအတွက် မထားမနေရ ထားနေရသည့် လူမှုဖူလုံရေးအာမခံတွင် အမှတ်စဉ်
ယနေ့ လုပ်ငန်းဌာနများနှင့် အလုပ်သမားများ မိမိတို့ လစဉ် ထည့်ဝင်နေရသည့် လူမှုဖူလုံရေး အာမခံငွေကို တာဝန်ကျေရုံ ပေးနေရတာမဟုတ်သလို
မိမိတို့ ရရှိမည့် ထိုအာမခံအကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်း တင်းတင်းရင်းရင်း ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရယူကြဖို့ လိုပါတယ်။
အလုပ်သမားသည်လူမှုဖူလုံရေးကဒ် ကို အထင်မသေးပါနဲ့ဘာမှ သုံးစားမရပါဘူးကွာ ဆိုပီး သေချာသိမ်းဆည်းမထားပဲ အသုံးမချတက်ရင် လူအ ဖြစ်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီတွေက အုပ်ချုပ်ရေးမန်နေဂျာတွေငွေစာရင်းဌာနက ဘဏ္ဍာရေးမှူးတွေလူမှုဖူလုံရေးအာမခံ အတွက်တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ပေးနေသူ ဝန်ထမ်းများသည်လည်း အစိုးရက မဖြစ်မနေလုပ်ခိုင်းလို့ ငွေသွင်းခိုင်းလို့ဆိုပီး အာမခံကဒ်လုပ်ပေးရုံအာမခံငွေသွင်းပေးရုံလောက်သာ ဝတ်ကျေတန်းကျေသဘောမထားစေချင်ပါ။
မိမိငွေမဟုတ်လ်ို့ပီးရင် ပီးတာပဲဆိုပီး လွယ်လွယ် သဘောမထားစေချင်ပါ။
အလုပ်သမားတိုင်း မိမိတို့အတွက်ကုမ္ပဏီက လူမှုဖူလုံရေးအာမခံထားပေးပီး ငွေသွင်းနေရတယ်ဆိုရင် မိမိတို့ရဲ့ လူမှုဖးလုံရေးကဒ် ရအောင်တောင်းပါ။
ကုမ္ပဏီက သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ယူထားရသူကလည်း လူမှုဖူလုံရေးရုံးမှ အာမခံထားပီးသော မိမိတို့ အလုပ်သမားများ၏ ကဒ်ကို ရအောင်တောင်းပါ။
ထိုကဒ်သည် အလုပ်သမားက အလုပ်ထွက်သွားလျှင် ယူသွားရမည့်ကဒ်ဖြစ်ပါသည်။
နောက်အလုပ်ဌာနသစ်ကိုရောက်သွားလျှင် ထိုကဒ်အမှတ်ကို လူမှုဖူလုံရေးလျှောက်လွှာတွင် ဖော်ပြပေးရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မိမိကဒ်သည် မိမိငွေသွင်းခဲ့သော လပေါင်းများစွာကို ရေတွက်ထားမှာဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။
ယခုအခါ လူမှုဖူလုံရေးအာမခံကဒ်များကို SMART CARD များဖြင့် လုပ်ပေးထားပါသည်။
ထို ကဒ်သည် အာမခံထားသူ အတွက် မှတ်ပုံတင်လို အသုံးဝင်သော ဘဝအာမခံချက်ပေးသော အလုပ်သမားဘဝ၏ သက်သေခံကဒ်လည်းဖြစ်ပေသည်။
လူမှုဖူလုံရေးအာမခံကဒ်ကို အထင်မသေးပါနဲ့အာမခံထားသူဟာ မကျန်းမာလို့ ဆေးကုချင်ရင် မိမိအတွက်သတ်မှတ်ပေးထားသည့်ဆေးခန်း တွင် အခမဲ့ဆေးကုသခွင့်ရမည်။
ထို ဆေးခန်းများသည် စနေ।တနင်္ဂနွေ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များတွင် ပိတ်ထားသဖြင့် အာမခံထားသူသည် ထိုပိတ်ရက်များတွင် အရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့် ဆေးရုံတက်ရပါက မိမိတို့တက်ရောက်သည့်ဆေးရုံမှဆေးစာများဖြင့် လူမှုဖူလုံရေးဆေးခန်းဖွင့်သည့်နေ့တွင် သွားရောက်ပြသကာ ဆေးကုသစရိတ်တောင်းခံနိုင်သည်။
အာမခံထားသူသည် မကျန်းမမာဖြစ်သည့်နေ့မှရှေ့ပိုင်း ၆ လအတွင်း လက်ရှိလုပ်ငန်းဌာနတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ရမည်।အနည်းဆုံး အာမခံကြေး ၄ လ စာ ပေးသွင်းထားပီး ဖြစ်ရမည်။
အာမခံထားသူ အလုပ်သမားသည် ကျန်းမာရေးကြောင့်အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့သည့်အခါဆေးခွင့်ယူထားစဉ် အလုပ်ရှင်မှ လစာမပေးသောကြောင့် ဝင်ငွေမရှိသောအခါပျမ်းမျှလစာ၏ ငွေ ၆၀% ကို ၂၆ ပတ်(၆ လစာ) အထိ လူမှုဖူလုံရေးဌာနသို့တင်ပြတောင်းဆိုံ ခံစားခွင့်ရှိသည်။
ဆေးစာများတင်ပြရမည်ဆေးစစ်ချက်များနှင့်လူမှု့ဖူလုံရေးဆေးခန်း ဆေးရုံ ဆရာဝန် ဆေးစစ်ချက်များပါရမည်။
အာမခံထားသူ အမျိုးသမီးများ မီးဖွားပါကဆေးခွင့် အတွက် လစာငွေ၏ ၇၀% ခံစားခွင့်ရမည်။
ဆေးကုသမှု မီးဖွားစရိတ် အနေဖြင့် မိမိလစာ၏ ငွေ ၅၀ % ရမည်။
ကလေးအမွှာ ၂ ယောက်မွေးပါက ၇၅ % ရမည် အမွှာ ၃ ယောက်အထက်မွေးပါက မိမိလစာ ပျှမ်းမျှ လစာ ၁၀၀ % အပြည့် ကို မီးဖွားစရိတ်အနေဖြင့်ရမည်။
ထိုစရိတ်ငွေသည် ကုမ္ပဏီနှင့်မသက်ဆိုပေ အာမခံထားသူအတွက် သီးသန့်စရိတ်ဖြစ်ပေသည်။
အာမခံထားသူ အလုပ်သမား အမျိုးသားသည် မိမိ၏ ဇနီး မီးဖွားရင် ခွင့် ၁၅ ရက်ယူန်ိုင်သလို ထို ၁၅ ရက်စာအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ငွေ တောင်းခံနိုင်သည်။
သို့သော် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားစဉ်ကတည်းက မိမိတို့ အားသတ်မှတ်ပေးထားသော လူမှုဖူလုံရေးဆေးခန်းကို ပြသပြီး သူတို့ စီစဉ်ပေးသည့်အတိုင်းလိုက်နာရပေမည်။
မီးဖွားခြင်း ကလေးစောင့်ရှောက်မှုများလည်း အခမဲ့ရပေမည်။
ထိုအကျိုး ခံစားခွင့်ကို အလုပ်သမားက မိမိရပိုင်ခွင့် ဖြစ်သလို သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ယူထားရသူများကိုယ်တိုင်က မိမိအလုပ်သမားများအတွက် ထိထိရောက်ရောက် တင်ပြတောင်းဆိုပေးရမည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် လူမှုဖူလုံရေး အာမခံ ဥပဒေ အာဏာသက်ရောက်သည့်နေ့မှ စတင်၍ ထိုဥပဒေပြဌါန်းချက်နှင့်အညီ အာမခံကြေး ပေးသွင်းသူများသည်။
အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့သည့် အာမခံထားသော အလုပ်သမားများအတွက် အသက်ပြည့် အငြိမ်းစားခံစားခွင့် အနေဖြင့် အာမခံကြေးငွေကို ၂၀၁၂ ခု ဥပဒေအရ စတင်ပေးသွင်းထားခဲ့စဉ်မှသည် နောက်ဆုံးအချိန်ထိ လပေါင်း ၁၈၀ (၁၅ နှစ်) စာ ပေးသွင်းထားပီးဖြစ်ပါကအလုပ်သမား၏ ပျှမ်းမျှ လစာ တစ်လစာ၏ ၁၅ ဆ ကို တစ်လုံးတစ်ခဲတည်းရယူခွင့်ရမည်။
၁၂ လ မှ လပေါင်း ၁၈၀ အတွင်း သွင်းထားပီးသူသည် အလုပ်ရှင်မှသွင်းပေးထားငွေ ၏ ၄၀ % နှင့် အလုပ်သမားသွင်းငွေကို အတိုးနှင့် ပြန်ရမည်။
၁၂ လ အောက် အာမခံငွေပေးသွင်းထားရင် ပေးသွင်းထားငွေအားလုံးပြန်ထုတ်ယူခွင့် ရှိသည်။
အာမခံထားသူသည် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းမရှိကြောင်းဆေးစာ နှင့် အစိုးရက သတ်မှတ်ထားသော အငြိမ်းစားသက်ပြည့် အရွယ်ဖြစ်ကြောင်အထောက်အထားတင်ပြရမည်။
လူမှုဖူလုံရေး အာမခံ ထားပြီးသော အလုပ်သမားတိုင်း အလုပ်ရှင်တိုင်းအာမခံကြေးများလစဉ် လတိုင်းတင်းတင်းရင်းရင်း ပေးသွင်းရသလို ရပိုင်ခွင့်အကျိုးများကိုလည်း တင်းတင်းရင်းရင်း မှန်မှန်ကန်ကန် ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးပီး တောင်းခံပေးကြဖို့အားပေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။
အလုပ်သမား နှင့် လူမှုဖူလုံရေး ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်လည်းလူမှုဖူလုံရေးအာမခံ ကဒ်များကို အလျင်မီအောင် ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ..
အားလုံးထိထိရောက်ရောက်အကောင်ထည်ဖော်လုပ်ဆောင်သင့်သလို |လုပ်ဆောင်ဖို့ တိုပ်တွန်းပါရစေ။
အလုပ်သမား များအတွက်လည်း ရသင့်သော ခံစားခွင့်များကိုလည်း လူမှုဖူလုံရေးဌာန အောက်ခြေဝန်ထမ်းများအထိ နားလည်သိရှိနေပီး အာမခံထားသူများ တောင်းခံလာပါက သေချာရှင်းပြကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနိုင်ရန် လမ်းညွှန်ပေးထားပေးဖို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
အာမခံကြေးများကို ထိထိရောက် ကောက်ခံ।ထိထိရောက်ရောက် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပြန်ပေး।ထိထိရောက်ရောက် အကျိုးခံစားခွင့်ကို ဥပဒေနဲ့အညီ လုပ်ဆောင်ပေးရင်ဖြင့် နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထု အတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အာမခံအစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဆေးခန်းများ।ဆေးရုံများ।ဆရာဝန်များအား ပိတ်ရက်မရှိ ၂၄ နာရီ ထားပေးနိုင်ရန်နှင့် အလုပ်သမားဆေးရုံများကို လည်း နယ်မြေဒေသ အလိုက်များစွာ ဖွင့်ပေးထားဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ!
သို့ မဟုတ် အစိုးရပြည့်သူ့ ဆေးရုံများမှာ လူမှုဖူလုံရေးကဒ်ကိုင်ဆောင်ထားသူ အရေးပေါ်လူနာများအား လက်ခံကုသပေးနိုင်ဖို့ စီစဉ်ပေးပါကလည်း အာမခံထားသူအလုပ်သမားများအတွက်ပိုအဆင်ပြေလာနိုင်ပါတယ်။
လူမှုဖူလုံရေး အာမခံ လုပ်ထားပါက အလုပ်သမားနောင်ရေး နှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်အေးနိုင်ကြပါစေမယ်။
အရေးကြီးတာက လူမှုဖူလုံရေးအာမခံကဒ် ရအောင်တောင်းပါ।သေချာကိုင်ဆောင်ထားပါ।အခွင့်အရေး အပြည့် အသုံးချပါ။မှတ်ပုံတင်လိုပဲ အရေးကြီးပါတယ်။
၂၀၁၂ လူမှုဖူလုံရေး အာမခံဥပဒေအရအောင်အောင်မြင်မြင်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ရင်သင် သူဌေး ဖြစ်နေရင်လည်း သင်လစာဝင်ငွေက ဒေါ်လာ ရာ ထောင်ချီရနေတာဆိုရင် ပြန်ရမယ့် ပမာဏကလည်း အများကြီးပါ။
လူမှုဖူလုံရေးအာမခံကဒ်ကိုင်ထားပီး ၁၅ နှစ်စာ သွင်းထားခဲ့တဲ့ အာမခံ ငွေတွေ အနိမ့်ဆုံး ပျှမ်းမျှ လစာက ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြစ်နေခဲ့ရင်တောင် ၁၅ ဆ ဒေါ်လာ ၁၅၀၀ ပမာဏသင်ပြန်မတောင်းရင်သင်လောက် မိုက်တဲ့သူ ဘယ်သူရှိအုံးမလဲ?
မိမိရဲ့ လူမှုဖူလုံရေးအာမခံ ကဒ်က အလကား သုံးစားမရတဲ့ ကဒ်လ်ို့ မမှတ်လိုက်ပါနဲ့ ဗျ!
အစိုးရက အကောင်းဆုံး စီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်လို့ တန်ဖိုးရှိတယ်।တန်ဖိုးသိပါ।တန်ဖိုးထားပါ။
ကျနော်မှာ အခု လူမှုဖူလုံရေး အာမခံကဒ် SMART CARD ရှိတယ်ေ।နာင်တချိန်မှာ အာမခံငွေ ဒေါ်လာ အနည်းဆုံ ၂၅၀၀ ပမာဏ လောက်တော့ ပြန်ရမှာပါခင်ဗျာ!
မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတို့ အနေနဲ့ လည်း ရခွင့်အပြည့်ရှိပါတယ်။
အလုပ်ရှင်များလည်း မိမိအလုပ်သမားရဲ့ အခွင့်အရေး မိမိက မပေးနိုင်ရင်တောင်မှ အစိုးရက ပေးတဲ့ အာမခံ အကျိုးကျေးဇူး များကို တောင်းခံခွင့်ရအောင် လုပ်ဆောင်ပေးထားနိုင်ကြပါစေဗျာ 🙂 😉 🙂
credit : Kophone Kyaw: